Richard Hernández sheegay
Waxaan kaliya ku rakiban aad plugin iyo waxaan jeclaan lahaa in la yidhaahdo WAAD KU MAHADSAN!! Waa arrin waxtar leh, fududahay in la isticmaalo, wax waqti ah baabbi'iya oo customizable in la saxo turjumaadaha automatic khalad. wax aan helay waxaan u maleynayaa in aan si fiican u shaqeeyo. Waxaa jira meelo oo aan turjumaadaha sax ah ma awooddo. orange The / calaamadaha cagaaran u muuqataa laakiin markii aan riix iyaga on the-suuqa kala nuurka aan loo soo. tusaale ahaan: wax kasta oo si fiican u shaqeeya in uu furmo suuqa ugu weyn ee aan blog (http://www.ricardofoto.es/blog/) laakiin aan helin markii aan galay mid ka mid ah post. Waxaan rajeynayaa in waxa solver in version soo socda!
Thanks iyo Year New Happy!
Thanks for bogaadin ku, dhibaatada ay u muuqataa in jquery la raran laba jeer bogagga hoose, taas waxay keeni kartaa khilaaf. Tan waxaa ka mid ah sababa plugin ama mawduuc, isku day inaad hesho khadadka jquery ee isha iyo iyaga comment. Waxaan mahad lahaa in aad halkan jawaab iyo wargeliyaan dadka kale ee meesha dagaalku wuxuu.
toban sano cusub Happy inaad aad.
Waxaad xaq u tahay. Waa wax la sameeyo iyada oo aan theme maxaa yeelay, markaan u baddashaan theme WP default ah waxa uu ku xalin. Waxaan aad u wanaagsan in barnaamijyada aan ahay, sidaas darteed inta aan sugayo waxa uu ku xalin qoraalkii dheeraad ah plugin ama aan theme, Anigu waan shaqayn karaan oo kaliya beddelo si theme default inta aan dib u tarjumaadda automatic.
December 28, 2009 at 11:27 at the
Waxaan leeyihiin soo jeedin ah versions dheeraad ah, haddii aad u considerer oo xiiso leh iyo waxa farsamo ahaan suurto gal ah. Waxaan ku qori my blog ee Spain, luqadda hooyaday, iyo bilaabay isticmaalaya plugin Transposh in ay af ingiriisi u turjum, Faransiiska iyo Portugal. Waan hadli karaa qaar ka mid ah English, si aan saxo turjumaad ah si toos ah iyo waxa ay halkan meesha aan ka helay qaar ka mid ah dhibaatooyinka.
plugin waxay u kala jabeen xukun kasta ee aagag kala duwan oo laguu ogolaado in aad inuu wax ka beddelo Bock kasta. Si kastaba ha ahaatee ma ahan inta badan ku filan turjumaad sax ah tan iyo markii marar badan aad u baahan tahay in la beddelo si ay xukunka si aad u hesho turjumaad dabiiciga ah. Tani waa sababta aan u malaynayaa in ay noqon doonto xiiso badan, haddii ay suuragal tahay, in xukun kasta oo aan la kala qaybsan tahay oo aad ka beddeli laga yaabaa turjumaad xukunka oo dhan.
Waxaan gebi ahaan ku heshiin aad ula, oo waxaan ka shaqeynayeen xal noocan oo kale ah, waayo, wax badan oo wakhti dheer (iyo off) iyo dhibaatadan waa wax adag. Fikradda waa in la abuuro interface ah taas oo u oggolaan doonaa inaad isu geeyo weedho in weedhaha, si kastaba ha ahaatee waxaa jiray arimo badan waxaan markii hore la rajeeyo. Waxaa halkaas ka heli doontaa, laakiin waxay qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah.
Waxaad u helida horumarka on tigidh halkan: http://trac.transposh.org/ticket/8